Su’aal Iyo Jawaab..Dagaalka Sokeeye Ee Itoobiya Ka Bilowday | Xaqiiqonews
Su’aal Iyo Jawaab..Dagaalka Sokeeye Ee Itoobiya Ka Bilowday
Aby Ahmed in uu ciidanka Fedaraalka Itoobiya ugu baaqo “dagaal”, waxa ay noqoneysaa shardigii ugu dambeeyey ee Itoobiya looga fadhiyey in ay soo buuxiso , si loo iclaamiyo “dagaal sookeeye” oo Itoobiya ay luqunta la gasha.
Dagaal Ayaa ka bilowday gobolada waqooyi ee Itoobiya gaar ahaan gobolka gooni u goosadka ee “Tigreey”, dagaalka ayaana sii xoogeystay markii ra’iisal wasaaraha Itoobiya Aby Ahmed uu ku baaqay “dagaal” lagu ilaalinaayo waxa uu ugu yeeray “midnimada Itoobiya”.
Maxay Tigrey Doonayaan?
Tigreey -ka waxa ay aad uga soo horjeedaan hab maamulka Aby Ahmed,dhowr mar ayeyna ku dhawaaqeen niyadooda ku saabsan “gooni isku taag” hase ahaate khilaafka ugu dambeeyey waxa uu salka ku haaya dib u dhigista doorashooyinka kuwaasi oo lagu waday in la qabto bilihii Agoosto iyo Sebteembar ee la soo dhaafay.
Xiisadahan Cusub Ma Lagu Tilmaami Karaa Dagaal Sokeeye?
Marka meel la iska dhigo xiisadda Tigreey, Itoobiya waxa ay mareysaa xaalad fowdo iyo dagaal ah, todobaadkan dhaxdiisa is maamulka Amxaarada ayaa ku eedeeyey Oromada in ay dileen ilaa 200 qof oo Amxaaro ah.
Gudoomiyaha Midowga Afrika Waxa uu shalay sheegay in uu ka walwalsanyahay dagaal isir neceyb ku saleysan oo Itoobiya ka bilowda.
Sidoo Kale Aqri: Maxaad Ka Taqaan Itoobiyaanka Qurba Joogta Ah ee Israa’iil Ku Sugan?
Goor sii horeysay mas’uuliyiin ka tirsan maamulkaa gooni isku taaga Tigrey-ka ayaa sheegay in faragelin walbo oo dowladda Ay sameysa uu ka dhigan yahay “dagaal”.
Warbaahinta ayaana aad u hadal haaya suurtagalnimada “dagaal sokeeye” oo Itoobiya ka qarxa, Wargeyska The Guardian waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay “Itoobiya oo qarka u saaran dagaal sokeeye”.
Ma Ku Farxeynaa Dagaalka Sokeeye ee Itoobiya?
Farsamo ahaan “maya”, Itoobiya waa dal faqiir ah oo ay ku noolyihiin in ka badan 100 milyan oo qof, sidaa darteed hadii uu halkaasi dagaal ka bilowda wadamada deriska ah oo Soomaaliyana ka mid tahay waa in ay isku diyaariyaan laba mid : in ay noqdaan marin waddo ah, ama in ay noqdaan hoy qaxooti.
Diblomaasiyad ahaan “Maya”, maxaa yeelay Itoobiya ciidamo badan ayaa ka joogo Soomaaliya, dagaal walba oo halkaasi ka dhacana waxa uu Soomaaliya ku keeni karaa saameyn toos ama mid dadban.
Laakiin shaqsiyan waxaan dhihi lahaa(farxad iyo naxdin toona ma mudna), sababtoo ah ma jirto sabab aan u fikirno dagaal ka socda Itoobiya, waxaa jira arimo badan oo ka socda gudaha Soomaaliya kuwaasi oo u baahan in aan ku faraxno ama aan ka naxno.
Erayada ugu fiican ee lagu sifeyn kara xaaladdan oo kale, waa gabaygii Laangadde allaha u naxariistee, markii laga dalbaday in uu ku farxo guushii Ingiriiska uu dagaalkii labaad ka soo hooyey, isgaa oo yiri